Masikati neusiku jira, China Masikati neusiku Sheet Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Jumei Acrylic Kugadzira Co, Ltd.
Bvisa Acrylic Sheet
Ruvara Acylic Sheet
Masikati & Husiku Acrylic Sheet
Utsanana (Bathtub) Acrylic Sheet
Mucheka, Glitter Acrylic Sheet
Yakakosha gobvu Sheet
Iva muparidzi wedu
Tora yemahara sampuro
Imba>chigadzirwa>Masikati & Husiku Acrylic Sheet
Opal & chena Colors Acrylic Sheet
Translucent & Opaque Ruvara Acrylic Sheet
Akapetwa Mavara Acrylic Sheet
Ruvara Chain Acrylic Sheet
Masikati neusiku sheet
Tine Zuva / Husiku pepa rinowanikwa mune yedu cast chigadzirwa mutsetse. Izvi zvinopa iro jira kutaridzika kweye jira dema panguva yemasikati (apo ASI yakadzoserwa kumashure) uye kuoneka kwegirazi jena husiku kana rakadzoserwa nechena mwenje sosi. Masikati neusiku jira rinouya kune rimwe divi rakasviba, saizi inowanikwa mu1220x2440mm uye 2050x3050mm.
muvhunzo Free samples
zvinhu 100% Nyowani Mhandara Raw Mitsubishi Chinyorwa
ukobvu 1.8, 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30, 50,60, 1.8, 60, XNUMX, XNUMXmm (XNUMX-XNUMXmm)
ruvara yakajeka (yakajeka), chena, opal, nhema, tsvuku, girini, bhuruu, yero, nezvimwewo OEM color OK
Saizi yakaenzana 1220*1830, 1220*2440,1270*2490, 1610*2550,
setifiketi CE, SGS, DE, uye ISO 9001
Kunze girazi mamodheru (kubva kuPilkington Glass kuUK)
MOQ Zvidimbu makumi matatu, zvinogona kusanganiswa nemavara / hukuru / ukobvu
dhirivahari 10-25 mazuva
General Cast Acrylic Sheet mavara:
◇ Yakakwira transmittance inosvika 92%;
◇ Kurema uremu: isingasviki hafu inorema segirazi;
◇ Kunaka kwemamiriro ekunze kusagadzikana nekuchinja uye kushanduka;
◇ Inoshamisa kusagadzikana kusagadzikana: 7-16 nguva yakakura kusagadzikana kupokana pane girazi;
Nt Yakanaka makemikari uye mehendi kuramba: kuramba asidi uye alkali;
Ase Kurerukirwa Kwekugadzira: Acrylic jira rinogona kuve rakapendwa, silika-yakavharidzirwa, yakavharidzirwa-yakavharwa, uye zvakare inogona kuchekwa, kubvarurwa, uye kugadzirirwa kugadzira chero chimiro kana ichipisa kune inoteedzereka nyika.
◇ Wepamusoro-giredhi yakakanda acrylic machira akagadzirwa kubva chete 100% mhandara mbishi zvinhu.
◇ Ese acrylic machira akaputirwa UV, anovimbisa machira kwete chinja kana uchishandisa kunze, unogona kushandisa kunze kwemakore 8-10.
◇ Hapana hwema kana uchivacheka ne laser kana CNC muchina, nyore kuvhunika uye kuumbika.
◇ Unodzivirira firimu inotengeswa kunze, mukobvu uye nyore kubvisa, hapana guruu yakasara.
◇ Yakanakisa kusimba kutsungirira uye kukwana kwakaringana
ZVIMWE UNIT ZVINOKOSHA
MASHOKO Specific Gravity - 1.19-1.2
Kuomarara kwaRoswell makirogiramu / masendimita 2 M-100
Shear Simba makirogiramu / masendimita 2 630
Flexural Simba makirogiramu / masendimita 2 1050
Tensile Strength makirogiramu / masendimita 2 760
Compressive Strength makirogiramu / masendimita 2 1260
SANGANO Didlectic Simba Kv / mm 20
Kumusoro Kugadziriswa Ahm > 10 16
OPTICAL Chiedza Transmittance % 92
HUTANYA Chaicho Kupisa
Cal / gr ℃
Coefficient yeThermal Cortductivily Cal / xee / cm / ℃ / cm
Hot Achigadzira Temp ℃ 140-180
Kupisa Defomation Temp ℃ 100
Thermal Kuwedzera Coefficient Cmfcm / V 6 × 10-5
ZVAKASIYANA Kubvisa Mvura (24Hrs) % 0.3
Muedzo % hapana
Kutora acrylic sheet 1000mm Kureba semuenzaniso.
Muzhizha (40 ℃), ichawedzera kusvika 1002 Munguva yechando (-30 ℃), Inotetepa kusvika 997mm.
Yedu yepamusoro mhando acrylic machira ane akajeka kujekesa, mamiriro ekunze uye yakakwira simba. Vanogona kuve thermoformed, akachekwa, akaboorwa, akakotamiswa, akagadzirwa, akanyorwa, akapukutwa uye akanamwa.Angave anoshanda kumasaini uye kushambadzira / zvekurapa / acrylic barrier / michina / sanitaryware / zvivakwa / dhizaini yemukati uye fenicha / mota / zororo / hofisi stationery / acrylic jewelry nezvimwewo.
◇ Certification iyo yedu yakakanda Acrylic sheet yakawanikwa: ISO 9001, CE, SGS DE, CNAS chitupa.
Mubvunzo: Uri wekambani kana kambani yekutengesa?
A: Isu tiri nyanzvi yekugadzira ine makore gumi neshanu ruzivo mundima iyi.
Q: Ndingawana sei iyo mharidzo?
A: Masampuli madiki aripo emahara, ingori mitoro kuunganidza.
Mubvunzo: Ndinogona kutarisira kuti ndiwane sei muyenzaniso?
A: Tinogona kugadzirira sampuli mukati memazuva matatu. Kazhinji zvinotora anenge mazuva mashanu ekuendesa.
A: MOQ ndeye 30pieces / odha. Imwe neimwe saizi, ukobvu.
Mubvunzo: Ndeapi mavara iwe aunogadzira?
A: Tine 60 enguva dzose mavara, Tinogona gadzirisa yakasarudzika ruvara maererano nezvaunoda.
Mubvunzo: Tinogona kuve neyedu Logo kana zita rekambani kudhindwa papakeji yako?
A: Chokwadi. Yako Logo inogona kuiswa papakeji nekudhinda kana kunamira.
Mubvunzo: Ndeipi yako inotungamira nguva yekugadzira kwakawanda?
A: Kazhinji mazuva 10-30, zvinoenderana nesaizi, huwandu uye mwaka.
Mubvunzo: Nguva yako yekubhadhara chii?
Q: Unoirongedza sei?
A: Rimwe jira rakafukidzwa ne PE firimu kana pepa rehunyanzvi, rakatenderedza 1.5 matani akarongedzwa mudanda pallet.
Jumei ndiyo yepasi-kirasi yakakanda acrylic machira ekugadzira & musimudziri, fekitori yedu iri muYushan Industrial Zone Shangrao Guta, dunhu reJiangxi. Iyo fekitori inovhara nzvimbo inosvika mazana mazana mashanu emamirimita, gore rekugadzira rinosvika matani mazana maviri.
Jumei anotangisa danho rinotungamira repasi rose rekukanda mitsara yekugadzira yeakisi, uye shandisa zana% mhandara yakachena mbishi kuona yakanaka mhando. Tine makumi emakore nhoroondo iri kuita yeacrylic indasitiri, uye tine nyanzvi R&D timu, Fekitori redu uye zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nenyika dzepasi rose ISO 100, CE uye SGS.
20 makore akakanda acrylic mugadziri
12 makore ekisipoti ruzivo
Yepamberi fekitori nyowani, nyanzvi injiniya timu kubva kuTaiwan, isu takatumira kune dzimwe nyika dzinopfuura zana nemakumi matanhatu.
Zvizere-otomatiki yekugadzira mitsara
Fekitori yedu yepamusoro ine matanhatu akazara-otomatiki ekugadzira mitsara, ayo anokwanisa kuverengera epamusoro kugadzirwa kwekuita, kuvimbika uye kuchengetedzeka. Parizvino tinogona kusvika matani makumi maviri ematanho seyakawandisa kuburitsa pagore, uye mune ramangwana rinouya, tichagara tichivandudza masimba edu kuzadzisa zvido zvinokura kubva kune vatengi vedu vepasirese.
Musangano usina guruva
Kushumira chinangwa chekupa yepamusoro-mhando acrylic jira zvigadzirwa, isu tanga tichivandudza musangano wedu: iyo isina guruva musangano inogona kuvimbisa yepamusoro-chikamu chemhando yezvigadzirwa zvedu kuburikidza neyakagadzirwa ese maitiro.
◇ Isina kubviswa, ine PVC micheto
Masiraidhi asina kufukidzwa senge 1250 * 1850mm, 1050 * 2050mm, 1250 * 2450mm, 1850 * 2450mm, 2090 * 3090mm
◇ Yakagadzirwa, isina PVC micheto
Yakatemwa saizi senge
◇ Yakafukidzwa ne logo logo bepa
Logo inogona kuve yedu brand Jumei Logo Zvakare OK kuita OEM logo
◇ Yakafukidzwa neakajeka mapepa mapepa
Mapepa ari nyore kwazvo kubvisa, kutengwa kubva kuMalaysia, zvese zviri pachena bepa uye JM logo bepa
◇ Yakafukidzwa ne PE firimu
Mhando mbiri dze PE firimuTransparent Pe firimu White PE firimu, inogona kuita OEM logo zvakare
Fekitori: Yushan Industrial Zone, Jiangxi China
Shanghai Hofisi: Kamuri 1309, Kwete 360, Changshou Road, Shanghai, China
Copyright © Jumei Acrylic Kugadzira Co, Ltd. Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Blog